UJAGADHATRI PUJA: IBALI KUNYE NOKUBALULEKA- PAMPEREDPEOPLENY.COM - YOGA-YOKOMOYA
UJagadhatri Puja: Ibali kunye nokuBaluleka
Ekhaya Yokomoya yeYoga Imibhiyozo Ukholo Mysticism oi-Sanchita Ngu USanchita Chowdhury | Ipapashwe: ngolwesine, Novemba 14, 2013, 15:21 [IST]
UJagadhatri luhlobo lukaThixokazikazi uDurga onqulwa kakhulu eNtshona Bengal nakwiindawo ezikufutshane. Igama 'Jagadhatri' ngokoqobo lithetha lowo uphethe umhlaba okanye iphela. Ke kukholelwa ukuba isithixokazi uJagadhatri ngoyena ubambe le ndalo ezandleni zakhe.
UJagadhatri unguthixokazi we-tantras. Uboniswa njengoThixokazi onamehlo amathathu oneengalo ezine kwaye ekhwele ingonyama. Kwisandla ngasinye saKhe uphethe ikhonkco, isaphetha, utolo kunye ne-chakra. Unxibe isarra enemibala ebomvu kwaye uhonjiswe ngamatye anqabileyo aqaqambileyo. Ume kwidemon efileyo ebizwa ngokuba yiKarindrasura eboniswa njengendlovu.
Makhe sijonge ibali kunye nokubaluleka kweJagadhatri puja.
Ibali likaThixokazikazi uJagadhatri
Eyona mpahla yobuso yolusu olomileyo eIndiya
Ngokwimbali, emva kokuba uthixokazi uDurga ebulele uMahishasura, oothixo baqala ukukholelwa ukuba ngenxa yokuba banikela amandla abo kuThixokazikazi wakwazi ukohlula idemon. Le ngcinga ibazalisa ngekratshi.
Ukoyisa oku kuzikhukhumeza, uBrahma wabonakala phambi kwabo ekwimo yeYaksha. Wagcina intambo yengca phambi koothixo kwaye wacela umngeni kubo ukuba bayitshabalalise. UThixo oMlilo, u-Agni akakwazanga ukuyitshisa, uThixo woMoya, uVayu akakwazanga ukuyihambisa ngaphandle kwawo onke amandla akhe amakhulu. Ke, kwaqondwa kubo ukuba amandla abo avela kumthombo wamandla wokugqibela, uShakti. Unguthixokazi omkhulu kwaye ungumthombo wawo onke amandla. Ubambe indalo iphela kunye namandla akhe amakhulu kwaye ke uJagadhatri weza kunqulwa.
Nawuphi na umntu onqula uthixokazi u-Jagadhatri ngokuzinikela uba yinto encinci. Usikelela abakhonzi bakhe ngamandla amakhulu kunye noloyiko. UJagadhatri emi phezu kwendimoni yedemon ibonisa ukuba ukulawula iingqondo zethu ezixhalabisayo njengendlovu, kufuneka sithathe amandla kaThixokazikazi uJagadhatri.
I-Jagadhatri puja ibhiyozelwa kuyo yonke i-West Bengal ngenzondelelo enkulu ngakumbi eChandannagore nakwiindawo ezimanyeneyo. Izithixo ezinkulu ze-Devi zibekwe kummandla wonke kwaye umnyhadala uhlala phantse iveki.
ubisi lwepeda iresiphi ngaphandle kobisi olujiyiweyo
Uluhlu lwamagama abhalwayo ababhali kunye neembongi
Uluhlu lwe-navratri prasadam lweentsuku ezilithoba
uyenza njani i-schezwan rice ekhaya
unxiba njani i-saree engezantsi kwenkaba
indlela yokuphelisa iintlungu zomlenze ngokukhawuleza